Nitaraina tamin'ny Russia i Russia noho ny Malaysia Airlines MH17 izay voatifitra tany Okraina tamin'ny 2014
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Nitaraina tamin'ny Russia i Russia noho ny Malaysia Airlines MH17 izay voatifitra tany Okraina tamin'ny 2014
Nitaraina tamin'i Russia i Russia noho ny Malaysian Airlines MH17 izay voatifitra tany Okraina tamin'ny 2014
Ny governemanta Netherlands dia nametraka fitoriana tamin'ny Fitsarana Eoropeanina momba ny zon'olombelona (ECHR) manohitra an'i Russia momba ny fitifirana ny taona 2014 Malaysia Airlines Jet Boeing mpandeha MH17 manerana an'i Okraina.
"Ny governemanta Netherlands dia nametraka fitoriana an'i Russia tany amin'ny ECHR," hoy ny fampandrenesana tamin'ny Alarobia. "Ny fitoriana dia napetraka noho ny fianjeran'i MH17 tany atsinanan'i Okraina tamin'ny 17 Jolay 2014."
Nanazava ny fitsarana fa ny Governemanta Netherlands dia nilaza fa ny balafomanga dia voan'ny balafomanga, natomboka tamin'ny rafitra fiarovan-tenan'ny Buk izay voalaza fa an'ny Russia.
"Ny Federasiona Rosiana dia nandà hatrany ny fandraisany anjara tamin'ny famotehana ilay fiaramanidina," hoy ny fitsarana nanampy.
Ny mpitondra tenin'ny minisiteran'ny raharaham-bahiny rosiana Maria Zarkharova dia nilaza teo aloha fa ny fanapahan-kevitr'i The Hague hitodihana any amin'ny ECHR noho ny fianjeran'ny Boeing Malaysia dia mbola fanenjehana iray hafa amin'ny fifandraisana Rosiana-Holandey, ary i Hague dia 'nanomboka tamin'ny fanamelohana iraisan'i Rosia' ny fianjerana MH17. hatramin'ny voalohany.
Manidy varavarana amin'ny fanafarana nikôtinina ve ny governemanta Aostraliana?